Azo ampiasaina amin'ny alalan'ny tranokala. Ny ankamaroan'ny tranonkala dia tsy mahavita manolotra tolotra izay ahafahanao mamandrika ny angon-drakitrao eo amin'ny milina. Ny safidy tokana tokony hanangonanao ny angon-drakitra dia kopia-mametraka ny angon-drakitrao eo amin'ny tarehimarika, izay asa mandaitra sy maharitra.
Izany no antony ilanao tranonkala mba hamenoana ny tetikasanao. Ny fanariana tranonkala, fantatra amin'ny anarana hoe fambolena tranonkala, dia fomba iray amin'ny famoahana lahatsoratra mitifitra mampiasa rindrambaiko web. Ny rindrambaiko amin'ny tranonkala dia manangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala sy tranonkala ahafahana mahazo ny fampahalalana voatahiry ao anaty rafitra na eo amin'ny milina eo an-toerana - curso fotografia publicitaria online.
Nahoana no Octoparse?
Fanabeazana amin'ny tranonkala dia manampy ireo mpanaraka amin'ny fampiroboroboana ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala sy amin'ny toerana mihetsika. Octoparse dia manolotra torolàlana momba ny fomba ahafahanao mampiasa rindrambaiko maimaim-poana amin'ny tranokala hanapahana tranokala sy tranonkala. Amin'ny tranga maro, ny rindrambaiko tranonkala dia natsangana ho an'ny sehatra manokana na maody ho an'ny navigateur.
Miaraka amin'ny Octoparse dia azonao atao ny mamolavola angona ilaina amin'ny rahona na mampiasa milina eo an-toerana. Ny fikojakojana ny rahona kosa dia manohana ny milina eo an-toerana. Ny fitaovana famoretana sy ny fikojakojana an-tsoratra dia zavatra manan-danja tokony hoeritreretinao rehefa manangona angon-drakitra.
Ny Octoparse dia mamela web maka ny data amin'ny fomba telo izay ahitana ny:
navoaka maimai-poana tao amin'ny tranonkala. Afaka mampiasa ny fomba famokarana rindrambaiko ianao mba hanapahana pejy web, URL, ary lisitry ny tranonkala.
Ity no fomba malaza indrindra amin'ny fanalana ny tranonkala. Ny fomba fampitomboana ny angona angon-drakitra dia miorina amin'ny URLs, lisitry ny lahatsoratra, lisitry ny lisitra, ary lisitra voatondro. Ny fomba fanao dia azo ampiasaina handrafetana pejy roa na maromaro.
Miaraka amin'ny Octoparse, mahazo ny data ianao ao anatin'ny segondra vitsy. Raha efa nanamarina ny lesona amin'ny tranonkala ianao dia tokony ho tonga amin'ny famoahana ny Octoparse 6 ianao. 2 version. Ny maodim-pahalalàna Octoparse dia atolotra maimaim-poana amin'ny tranonkala. Ny famoahana vaovao dia ahafahanao mamerina ireo angona avy amin'ny aterineto ho tabilao miendrika.
Ampiasao ny mofomamy tsotsotra Octoparse, alefao ao amin'ny tranonkala tianao haleha ny URL. Tsindrio ny bokotra "Smart" ary jereo raha mihodina ho latabatra natokana ny pejy.
Ny raki-pehezin'ny Octoparse rindrambaiko tranonkala dia entina amin'ny:
Mba hampahafantarana ny angona ampiasaina amin'ny Octoparse API, dia tokony hanana kaonty matihanina ianao Nahitana angona avy amin'ny asa mihoatra ny iray ao anatin'ny rahona. Ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny manamarina ny fidirana amin'ny alàlan'ny fandefasana ny mpampiasa anao sy ny tenimiafinao ao anaty boaty fikarohana.
Miaraka amin'ny Octoparse dia azonao haingana ny data avy amin'ny latabatra HTML ary manondrana ny angona ao anaty tsindrim-peo Comma.
Azo alaina ao amin'ny tahiry MySQL na SqlServer ny angona rakitra.
Karazana fampitomboan'ny Octoparse
Ity rindrambaiko web raitra ity dia manolotra haitao maimaim-poana ho an'ireo endriny farany. Ny fonosana dia ahitana:
Automatik IP rotation
Octoparse dia rindrambaiko maimaim-poana amin'ny aterineto izay mamoaka ny angona avy amin'ny tranonkala sy ny tranonkala. Amin'ny Octoparse, azonao atao ny mahazo ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny famokarana fitrandrahana ao amin'ny rahona na tranokala amin'ny fitoeranao miaraka amin'ny milina eo an-toerana. Vahao ary ampidiro Octoparse ao amin'ny solosainao mba hanefika ireo tranonkala serasera, ny lahatahiry ary ny hafatra an-tsoratra.